Loharano Q - Wikipedia
Ny Loharano Q na Tahirin-kevitra Q dia loharano heverina fa very, niavian' ireo andalan-tsoratra iraisan' ny Evanjelin' i Matio sy ny Evanjelin' i Lioka, nefa tsy hita ao amin' ny Evanjelin' i Marka. Fanangonan-dresak' i Jesoa (grika: Logia) izany, izay heverin' ny mpikaroka fa nosoratana tamin' ny taona 50 any ho any. Ny petra-kevitra momba ny Loharano Q dia vokatra mivantana avy amin' ny petra-kevitry ny loharano roa.
Ny hoe Q dia fanafohezana ny teny alemàna hoe Quelle izay midika hoe "loharano".
Ny fanangonan-dahatsoratra Logia, izay niezahan' ny mpikaroka narafitra araka ny mety ho endriny, dia ahitana, araka an' i Frédéric Amsler, "andininy na sombintsombin' andininy azo antoka miisa mihoatra kelin' ny 200, ka fanampin' izany ny andininy na sombin' andininy miisa 100 eo ho eo izay tsy tena azo antoka", izany hoe voanteny miisa 4 500 eo ho eo, ka ny antsasa-manilan' izany dia "mitovy tanteraka sady mifanarakaraka amin' ny filaharana mitovy ao amin' ny Filazantsaran' i Matio sy ao amin' ny Filazantsaran' i Lioka, ka manohana ny fisian' ny loharano iraisana izany, izay mety ho am-bava na an-tsoratra".
Maro ireo fomba fiasa enti-mandinika lahatsoratra ka nahafahana mamerina amin' ny tokony ho endriny sy votoatiny ny Loharano Q: nifototra indrindra tamin' ny fomba fiasa fampandriana an-tsoratra ny evanjely sinôptika sy tamin' ny sokajin-dahatsoratra ireo mpanao heviteny.
Ny Redaktionsgeschichte ("fandinihana ny fomba fampandriana an-tsoratra") dia maneho fa ny Filazantsaran' i Lioka dia mifikitra amin' ny loharano nanovozany kokoa raha mitaha amin' ny Filazantsaran' i Matio: rehefa mampiasa andalana avy ao amin' ny Filazantsaran' i Marka ny Filazantsaran' i Lioka dia manaja kokoa ny filaharan' ny hasin-dahatsoratra (perikôpa). Mba hamerenana ny endriky ny Loharano Q dia nisafidy ny fandaharan' ny Filazantsaran' i Lioka ny manampahaizana, ka izany, ohatra, no anoratana hoe Q6:20 hanondroana ny "filazàm-pahasambarana" voalohany ao amin' ny toriteny "teo an-tendrombohitra" ao amin' ny Filazantsaran' i Matio sy "tao an-dohasaha" ao amin' ny Lioka.
Mifamadika amin' izany ny hita ao amin' ny Filazantsaran' i Lioka izay manaja kokoa ny endriky ny haisoratra noho ny hita ao amin' ny Filazantsaran' i Matio, izany no mahatonga ny mpanoratra ny Filazantsaran' i Lioka hanova bebe kokoa ny voambolana ampiasainy raha ampitahaina amin' ny loharano nanovozany. Noho izany dia mitoky tamin' ny Filazantsaran' i Matio ny mpikaroka tamin' ny asa famerenana ny mety ho endriky ny Loharano Q.
Ny Formgeschichte ("fandinihana ny endrika") dia mampiseho ny Loharano Q ho toy ny fanangonan-tenin' i Jesoa (Logia). Izany toetra mampiavaka izany dia tsy ahitana tranga maningana afa-tsy amin' ireto andalana efatra ireto: ny fitantarana ny batisa (Lio. 3.21-22), ny fitantarana ny fakam-panahy (Lio. 4.1-13), ny fitantarana ny fanasitranana (Lio. 7.1-10) ary ny fitantarana famoahana demonia (Lio. 11.14-17).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Loharano_Q&oldid=1012878"
Voaova farany tamin'ny 21 Jolay 2021 amin'ny 09:54 ity pejy ity.